Pep Guardiola Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Uu Marcelo Bielsa Ku Yidhi Dhamaadka Kulankii Leeds & Man City - Gool24.Net
Pep Guardiola Oo Daboolka Ka Qaaday Wixii Uu Marcelo Bielsa Ku Yidhi Dhamaadka Kulankii Leeds & Man City
October 4, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Pep Guardiola ayaa shaaciyey wixii uu tababaraha Leeds United ee Marcelo Bielsa weydiiyey dhamaadka kulankii ay barbarraha ku kala baxeen labadooda kooxood ee kusoo dhamaaday 1-1;
Leeds United ayaa dhibaato badan u geysatay Man City, waxaana Marcelo Bielsa iyo wiilashiisu ay ku dhowaadeen inay guusha kala hoydaan kulankii ay ku martigeliyeen garoonka Elland Road, taas oo gool uu waqti hore dhaliyey Raheem Sterling uu qaybtii labaad ka daba yimid Rodrigo. Guusha ciyaarta ayay u qalmaysay Leeds United oo heshay fursado qaali ah inkasta oo City ba aanay ka yaraysanin.
Pep Guardiola ayaa la arkayay isaga oo la hadlaya Marcelo Bielsa markii uu garsooraha ciyaartu afuufay siidhiga dhamnaadka, kaddibna waxa uu tababaraha reer Spain warbaahinta uga sheekeeyey wixii ay is yidhaahdeen.
Guardiola oo Sky Sports la hadlayay ayaa yidhi: “Wuxuu Marcelo Bielsa i weydiiyey sida ay ciyaartu ila ahayd. Waxa aan u sheegay in aanan awoodin inaan qiimeeyo kulanka maadaana hal ilbidhiqsi ka hor ay dhamaatay, walina aanan firaaqo u helin.”
Leeds United ayaa yeelatay toddoba dhibcood oo ay ka urursatay afartii ciyaarood ee illaa hadda ay dheeshay horyaalka Premier League oo ay ka maqnayd muddo 15 sannadood ah, waxaanay awood u yeesheen inay iska celiyaan Man City, sidoo kalena Liverpool ay waqti dambe kaga adkaatay rikoodhe uu Mohamed Salah u dhaliyey.
Pep Guardiola ayaa qirtay in Leeds United ay tahay koox adag oo ay ku dhibaatoodeen, waxaanu amaanay tababare Marcelo Bielsa iyo wiilashiisa, isaga oo yidhi: “Waxay ahayd ciyaar wanaagsan. Marka ay labada kooxoodba doonayaan inay is weeraraan, waa ciyaar fiican. Waxa aanu 30kii daqiiqadood ee u horreeyey samaynay ciyaar cajiib ahayd oo aanu dhalin karaynay goolasha aanu u baahnayn.
“Kooxdu, booska aanu ku jirno, waxay muujinaysaa dhaqan cajiib ah. Nasiib-darro, maanaan guuleysan, laakii hore ayaanu uga socon karnaa halkan. Haddii aanu ka caban lahayn ciyaartoyda naga maqan umaanaan ciyaari karneen sida aanu maanta u dheelnay.”
Taatikada ay ku ciyaaraysay Leeds United ayuu sidoo kale ka hadlay, waxaanu yidhi: “Leeds waxay dhigtay khadkayaga dhexe dabooda ciyaartooyo badan. Intaa kaddib si cajiib ah oo degdeg ah ayay noo weerarayeen, waxay ahaayeen laacibiin dheeraynaya, mana fududa in lala ciyaaro kooxdan oo muujisay sida ay u wanaagsan yihiin.
“Anagu waxaanu helnay fursad aanu ciyaarta ku dilno. Qaybtii dambe waxay ahayd isku-mid balse anaga ayaa fiicnayn dhamaadka qaybta dambe.”